कसरी पत्ता लाग्यो नक्कली परीक्षार्थी ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकसरी पत्ता लाग्यो नक्कली परीक्षार्थी ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
पक्राउ पर्नेमा २२ वर्षीय अमर पण्डित, २२ वर्षीय अनिकेत चौधरी, २६ वर्षीय राम आशिष यादव, २४ वर्षीय इस्तियाक अहमद र २३ वर्षीय सन्नी कुमार शाह छन् ।
अमर पण्डित महोत्तरी घर भई किस्ट कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनले धनुषाका २१ वर्षीय वृकेश यादवको नामबाट सीसीआरसी कलेज कुमारीपाटी ललितपुरबाट परीक्षा दिन लागेका थिए ।